Sida loo Beddelaan 3GP in MOV (Quicktime)?
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan 3GP in MOV (Quicktime)
Sida loo Beddelaan 3GP in MOV (Quicktime)
Waxaad tahay badan tahay in ay soo gaarto qaar ka mid cajiib ah ama funning 3GP videos, qaar ka mid video websites 3GP midkood sida 3gpvideos.org ama ka dadka kale telefoonada gacanta. Waa hagaag, wax fikrad ah si loogu badalo, kuwaas oo aad u jeclaystay in 3GP MOV (QuickTime) si aad iyaga u ciyaari karaa QuickTime, ama wax ka bedel iyaga oo ku iMovie ama Pro Goo Final samaynta masterpiece aad shakhsi, xitaa dajiyaan in Lugood u hagaagsan in iPhone iyo iPad iwm?
Haddii ay sidaas tahay, 3GP ah loo baahan yahay si Converter MOV si adag lagula talinayaa in aad. Video Converter kuu ogolaanayaa inaad si ay ugaaraan 3GP inay diinta ka MOV kasta oo video laga badiyay platina Windows aan. Iyadoo version Mac of qalab - Video Converter u Mac waxaa loo isticmaali karaa si loogu badalo 3GP in MOV ee Mac (Snow Leopard, Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ahaa).
Halkan tutorial waxay kuu muujinaysaa sida ay u badalaan 3GP in MOV (QuickTime) ee Windows. Ka hor inta in, rakibi oo ay maamulaan version Windows ee app this.
Talaabada 1: Import 3GP files in 3GP in MOV (QuickTime) Converter
Guji "Add Files" doorasho ee suuqa kala barnaamijkan ayaa si ku shuban 3GP faylasha aad rabto in lagu daro in barnaamijkan. Ama waxaad si toos ah jiidi karaan & hoos u files 3GP barnaamijkan. Sababtoo ah taageerada ay diinta Dufcaddii, waqtigan, waxaad dajiyaan karaa dhowr videos 3GP.
Talaabada 2: Dooro MOV oo dhigay H.264 sida video codec
Fur liiska qaab hoos-hoos iyo dooran MOV ee "Qaabka"> "Video" doorasho. Waxa kale oo aad u baahan tahay si ay u dejiyaan H.264 sida codec video ee "Settings" suuqa kala hadal adigoo gujinaya button marsho ee interface ugu weyn.
Fiiro gaar ah: Haddii sababta aad u badalo 3GP in MOV waa xaq ugu on aaladaha Apple, sida iPod taabto, iPhone, iPad iyo Apple TV, halkan, waxa kale oo aad si toos ah u dooran kartaa qaab filaayo in wax soo saarka ee "Apple" category.
Intii aanay, haddii aad rabto in aad wax ka bedel videos, riix badhanka Edit ku geli interface tafatir ah. Waxaad ka heli doontaa app this ku siinayaa ikhtiyaarka in ay noola videos, bedesho saamaynta video, iyo sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto watermark iyo Cinwaan si aad video.
Talaabada 3: Start 3GP in MOV (QuickTime) diinta
Markii wax walba la sameeyo, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhacay "Beddelaan" si aynu 3GP si MOV Video Converter inuu wax ku sameeyo nasasho kuu. Dabcan, aad ha karo waxa maamula ee asalka ah si aad wax kale samayn kara in aad kombuutarka.
Hoos waxaa ku a video tutorial faahfaahsan:
3GP DVD: Sida loo Guba 3GP in DVD ee Mac / Windows
Sida loo kala tagney / Goo / goo MKV Files in Windows / Mac
Ugu fiican ayaa M2TS Converter si loogu badalo M2TS iyo gubi M2TS
Sidee Baan dhoofinta iPhoto Muqaal Si iDVD?
Sida loo Beddelaan H.264 Files
VOB Converter: Sida loo rogo ama faylasha VOB
Sida loo Encode DivX files leh DivX Encoder
Sida loo Beddelaan Mpg in FLV in Windows iyo Mac (Yosemite ka mid ah)